I-imeyili yibhizinisi elingathi sína… yisaziso sohlelo lokusebenza esuselwa kwimvume sokuthi ibhizinisi lakho lizozethulela ubuso balowo obhalisile. Ibhokisi lokungenayo le-imeyili ligcwele phama futhi wonke umuntu ufuna izaba zokwehlisa umthwalo nokuzikhipha ohlwini lwababhalisile. Akuthathi okuningi ukuvinjelwa, uphonswe kufolda ye-SPAM, ususwe ngaphambi kokuvulwa, ukukhishwa ohlwini lwababhalisile - noma okubi kakhulu - okubikwa njengo-SPAM.
Uhlu lokuhlola lukuhambisa phakathi nokulethwa kwe-imeyili, ukuhambisana kweklayenti le-imeyili, ukuhlola kuqala kwebhokisi lokungenayo, nokuhlola kuqala okuvulekile ukuqinisekisa ukuthi konke kubukeka kukuhle futhi kusebenza kahle ngaphambi kokuthumela! Uma ungathanda, ungakwazi ngisho landa inguqulo yokuphrinta ukusetha edeskini lakho eduze kwakho!